सिंगापुरमा हुने उपचारले राम्रो नतिजा आउने डा. काफ्लेको विश्वास – PanchKhal Online
Home/समाचार/सिंगापुरमा हुने उपचारले राम्रो नतिजा आउने डा. काफ्लेको विश्वास
काठमाडौं । बरिष्ठ मृगौलारोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्रिटेनाइन बढेकाले सिंगापुरमा हुने उपचारले राम्रो नतिजा आउने विश्वास दिलाउनुभयो । एन्टिबडीको मात्रा घटाउन सकियो भने स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा डा. काफ्लेले मुलुकको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति उपचार गर्न जाँदा नकरात्मक टिप्पणी गर्न नहुने आशय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देश डुबाउने गरि खर्च हुँदैन् । यो खर्चिलो उपचार होइन ।’ यद्धपी उहाँले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था के–कस्तो छ ? भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाली जनतालाई निःशुल्क डाईलाईसिसको सुविधा दिलाउने कामको जसपनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई जाने बताउनुभयो ।डा. काफ्लेले एन्टीबडी बढेर जानु भनेको खतरानाक भएको टिप्पणी गर्दै यस्तो अवस्थामा साधारण औषधिले पनि काम नगर्ने जनाउनुभयो । तर, प्लाज्माफेरिसिस मार्फत एन्टीबडी नर्मल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । एक सेसन गर्दा नेपालमा ७० देखि ८० हजार रुपैयाँ लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कम्तिमा पनि ६ पटक गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको मुटु, कलेजोलगायतका महत्वपूर्ण अंगहरु राम्रो भएकोले पूनः मृगौला प्रत्यारोपणपनि हुनसक्ने काफ्लेले बताउनुभयो ।
रवि लामिछानेलाई नियोजित रूपमा फसाउन खोजिएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग !